Torolàlana momba ny doka amin'ny finday ny dokambarotra
Torolàlana ho an'ny finday
Alatsinainy Desambra 31, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tamin'ny herinandro lasa dia nandany fotoana kely tamin'ny ray aman-dreniko aho ary taitra be rehefa naneho ahy izy ireo fa samy nivarotra tamin'ny finday ho an'ny iPhones. Na dia sosotra aza izy roa tamin'ny fianarana ny fampiasana azy ireo, dia nilaza tamiko izy ireo fa lafo kokoa ho an'ny iPhone 4 io raha oharina amin'ny telefaona mahazatra. Mazava ho azy, ny atiny ao anatiny dia ny mpanome finday azy ireo manantena ny hampidi-bola fanampiny avy amin'ny finday avo lenta noho izy ireo amin'ny alàlan'ny modely mora vidy kokoa. Na izany na tsy izany, ny Neny dia efa nandray ny fampiharana fivarotana eo an-toerana sy ny karoka teo an-toerana.
Fotoana kely fotsiny dia efa lany andro ilay finday mahazatra ary tsy zaraina intsony. Izany dia hanome ny besinimaro fidirana amin'ny fangatahana fikarohana sy fiantsenana eo an-toerana - hampiakatra bebe kokoa ny habetsaky ny lazan'ilay dokam-barotra amin'ny fikarohana finday. Mahagaga ny isa ary efa eo ny fotoana ahazoan'ny mpivarotra mazoto manararaotra. Mpiara-miasa StartApp miaraka amin'ireo mpamorona rindrambaiko hanampy azy ireo hahazo vola bebe kokoa amin'ny rindranasan'izy ireo maimaim-poana amin'ny alàlan'ny fampiasana vola amin'ny fikarohana ary nametraka an'ity sary ity tamin'ny mpanao dokambarotra finday ambony:
Tags: dokambarotra findaydokam-barotra findaykaroka finday
Media sosialy: tontolon'ny mety hisian'ny orinasa kely
Ataovy ao anatin'ny fifandraisanao ny fonao